Monday, May 20th, 2019 - 14:00:06
Thursday May 02, 2019 - 14:26:57 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiddigaha ku cayaarayaya magca Generaal Daud Gym ayaa badhig kale oo cajiib ah ka sameeyay tartanka xiddigaha kadib markii ay guuldarroqaraar dhadhan siiyeen xiddigaha Muqdisho Cable oo kamid ahaa xiddigahaku guulaysaysiga tartanka loo saadaalinayay.
Kulanka ayaaGeneraal Daud Gym u ahaa kulanki labaad ee tartanka halka Muqdisho Cable uu u ahaa kulanki saddexaad ayaa labada koox garoonka lasoo galeen xiddigo si wayn u xafiltama haddana hal koox ka wada tirsan.
Tartanka xiddigaha waxaa door muhiim ah ku leh cayaartoyda da’yarta mustaqbalka ku leh cayaarta kubadda Gacanta iyadoo koox waliba ay u cayaarayaaan laba cayaaryahan oo heerka koowaad ah si ay waaya –aragnimo uga helaan, waxaana xusid mudan in labada koox ay u safnaayeen afar laacib oo kamid ah xiddigaha ay ku duusho Naadiga Horseed oo kala ah, Shubaaye iyo Yaasiin oo Muqdisho Cable u safnaa iyoXuseen Basbaas iyo Cabdisaaq Afeey oo Generaal Daud Gym u cayaarayay.
Kulanka oo aad u xiiso badnaa labada kooxna ay soo bandhigeen cayaar ad loogu bogay waxaan aqyabat hore lagu kala nastay 10-7oo ay xiddigaha Generaal Daud Gym hogaanka ku hayaan.
Marki layksu soo laabtay labada koox ayaa muujiyay cayaarxiiso leh oo weerar ku dheehan , waxayna cayaarto noqotay mid goolal deg deg ah layska dhaliyo waxaana muuqatay in doorka weeraryahanada uu aad uga sareeyay kan goolhayayaasha waxayna cayaarta ugu damabayn kusoo idlaatay 22-18 o ay guusha ku raacday Xiddigaha General Daud Gym oo sidaas lix dhibcood hogaanka tartanka kula midoobay xiddigaha Banadir Zone.